Izibonakaliso zemozulu zabantu zilwazi olude lwabantu kunye nezizukulwana zidlulela omnye komnye malunga nempawu ezahlukileyo ezichazela ukuba iimeko eziza kwenzeka njani kwixesha elizayo. Ngokuqhelekileyo, i-omen ineengcambu zayo kwixesha elidlulileyo lobuhedeni. Ngaphandle kokungazi, kwakungekho ubomi-kwakungenxa yabo ukugqiba ixesha lokuvuna, nini ukuhlwayela njalo njalo. Ngoku ngoku sifunda imozulu kwiingxelo zemozulu, kodwa oku akuthethi ukuba imiqondiso iyeke ukusebenza. Zingasetyenziswa ngoku, ukuba kukho isidingo esinjalo.
Isimo sengqondo seemeteorologist kwiimpawu zemozulu
Uninzi lweengcamango zabantu zifumana iimpawu zeemeteorologist ezifanelekileyo. Le yimiqondiso enjengokuthi "Izinja zijikeleza emhlabathini - kuya kuba nekhephu okanye imvula", "Ukuba inja idla kancane kwaye ilala kakhulu - kwimvula", njl njl. Nangona kunjalo, kukho imiqondiso emininzi, njengokuthi "I-violet iye yahluma - ixesha lokutshala i-parsley", "Amacici avela kwimaphupule - ixesha lokuhlwayela iibhotile", "Ukuba amaqabunga e-birch avuliwe ngokupheleleyo, ngoko ungatshala iifatata" zichanekile - ziqwalasela indlela izityalo ukuziphatha kwimeko yendalo kwaye phantsi kweyiphi imeko iqala ukuqhakaza, ukuvula, ukuguqula iphunga kwaye ubonise ezinye iimpawu ezibonisa utshintsho kwiimeko zemozulu.
Imizekelo iza kuthatha imozulu
Kwaye imvelo ngokwayo, kunye nayo yonke into edibene nayo ngenye indlela, ingasebenza njengezibonakaliso zokubikezela imozulu, kodwa bambalwa abantu bayayibona. Ngezantsi zibonakaliso ezinokuthenjelwa apho ungafumana khona imozulu ezayo:
Ngomsi ovela kumbhobho okanye ophuma emlilweni-ukuba umsi uphakama esibhakabhakeni phezulu phezulu, ke imozulu iya kucacisa, kwaye ukuba iyabaleka ngezinye iintlobo zemibala ehlukeneyo-lindela imozulu;
Ekuphumeni kwelanga isibhakabhaka sibomvu - kungekudala kuya kuvula;
Izityalo ezininzi ngaphambi kokuba imvula ichithe umswakama obuninzi, njengokungathi "kulila" ixesha elithile ngaphambi kokuba kuhlambe;
Eyona nto ibona ukuba isimo sezulu sitshintsha, inambuzane ezininzi. Ukuba uqaphela ukuba iimbotyi zifihla i-pupae ejulile kwi-anthill okanye ukuba iinyosi zinyuka kwimfuyo encinci kunokuba yinye enye-kufuneka ukhawuleze uphahla okanye ukhangele ukuba unesambulela-kungekudala izakuvula. Kwakhona, ezininzi iipasisiti, ezifana neempukane, inyoyi, iimpukane ngaphambi kokuba imvula ibambe ngamandla kunamaxesha aqhelekileyo;
Uninzi lwezophando lwezenzululwazi lubonisa ukuba intlanzi ivakale kakhulu imozulu. Ukuba kungekudala imvula encinane, ngoko intlanzi iyancipha, kwaye xa kukho iindudumo ezinamandla, intlanzi kuqala ikhupha emanzini, ize iwele ngokujulile kunokwenzeka. Nangona intlanzi ye-aquarium iyasabela xa kutshintsha kwemozulu -kuba bayakuma ixesha elide ephantsi kwe-aquarium, ke imozulu iya kucacisa, ukuba iya kuhlala isondele, ibe iya kudala imvula;
Zininzi iimpawu zemozulu ezichaza ukuba isimo sezulu sichaphazela ama-frogs aqhelekileyo. Ukuba ininzi yamaxoxo ehlala emhlabeni, ngokukhawuleza imvula. Ukuba amaqanda angamaqabunga ngokuhlwa ngokuhlwa, ngoko umhla olandelayo imozulu iya kucace kwaye ilanga;
Abantu abaninzi baye babona indlela kwizulu lezulu elunxwemeni lolwandle oluqhaqhazelayo, kodwa bambalwa bayazi ukuba lo ngumqondiso obonakalayo wemvula yokuqala;
Unokuqikelela ngezulu kunye neentaka. Ukuba iintlunkulu zonke zibonakala "zihlamba" eluthulini, kuthetha ukuba kuya kudala imvula. Kwakhona, phambi kwemvula, iintaka ezininzi zihlala emithini kwaye zikhwaza ngokukhawuleza;
Ukuba unenja ekhaya, ungazama ukugcina ukuziphatha kwayo. Ukuba inja yakho iyawa phantsi, mhlawumbi imozulu iya kutshatyalaliswa ngokukhawuleza, kunye nokuba igosa kakhulu emhlabathini. Kodwa ukuba inja ilele ukusabalalisa i-paws, imozulu iya kufudumala kwaye icace;
Eyona nto ingakumbi kwiimeko zemozulu utshintsha ikati. Ukuba ikati ityhiyelwe ixesha elide, kungekudala kungekudala imimoya embi kakhulu, ukuba ukukhwabanisa umsila, kuya kuvula, kwaye ukuba ilala nje, iyakwazi ukufudumala nokushisa.
Ewe, kulolu luhlu alufakwe kuzo zonke iimpawu ezadlulayo phakathi kweeminyaka phakathi kwabantu, kodwa olu luhlu luhlala lwanele ukuba lukwazi ukuqonda ngexesha elifanelekileyo lemozulu elibi, nangona akukho nto ngaphambili eyayifaka isimo sezulu esibi. Ulwazi luncedo kakhulu luza kuthatha umlobi kunye nabazingeli - ukuze imvula eyaqala ingabandakanyeki. Ewe, kwaye umntu oqhelekileyo angakwazi ukufika ngokufanelekileyo kulolu lwazi. Ngoko impumelelo kuwe kunye nemozulu!
Izikali zeHoroscope ngoJanuwari
Indlela yokufunda kakuhle iqhinga
IHoroscope ngoJanuwari: umhlaza
Indlela yokuchonga uhlobo lomntu ngomhla wokuzalwa?
Imithetho yesondo yomlomo: njani ukuyiphepha?
Imiqulu ye-zucchini kunye ne-cottage cheese
Ukungabi nomnqweno wesondo kwabafazi
Iipeaches kunye ne-sinamoni kunye nee-alimondi
Ukucoca indlu eFeng Shui
Xa kufuneka udibanise ukushisa kubantwana
Umnqweno omuhle ngo-Matshi 8, umama, udade, ugogo, intombi, ootitshala, oogxa-mabhinqa - Ndiyakuvuyela kwi-SMS, ivesi kunye neprose
Indlela yokwenza izandla zakho zihle?
Iyeza lemveli: induna ebunzini
Ukungabikho ndawo kunye neentandwayo: kunye nokokugqoka ilahleko kwiLamoda - izihlangu eziphambili zekwindla ka-2015
Ungayitshintsha njani indlu yangaphakathi ngoncedo lwezinto ezingathembekiyo?
Iimvakalelo zithinta njani impilo yabantu?
Yintoni esilindeleyo kwiminyaka engama-25 ezayo: izibikezelo zama-futurists aziwayo
UDmitry Hvorostovsky ulungiselela iklasi yesibini yekhemotherapy